သတင်းလှုပ်ရှားမှု Trader EA Review - အကောင်းဆုံး Forex EA's | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာသတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EAသတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA သုံးသပ်ချက်။
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA 2
စျေးနှုန်း: $ 347 (တစ်ကြိမ်တည်းငွေပေးချေမှု၊ သက်တမ်းလိုင်စင်၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများ & အပြည့်အစုံထောက်ပံ့သူ)T)
ငွေကြေးစွမ်း: AUDJPY, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD နှင့် XAUUSD (ရွှေ)
မွတ္စု: News Action Trader ၏2အမျိုးအစားစုံသည် အခုရရှိနိုင်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး:
- ၂ လငွေပေးချေမှုအစီအစဉ် အသေးစိတ်လက်စွဲစာအုပ်၊ အခမဲ့အပ်ဒိတ်များနှင့်ရောင်းချသူအထောက်အပံ့၊ ပုံမှန်စျေး - တစ်လလျှင် ၂၄၇ ဒေါ်လာ
- တစ်ကြိမ်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ် - အသေးစိတ်လက်စွဲစာအုပ်၊ အခမဲ့အပ်ဒိတ်များနှင့်ရောင်းချသူအထောက်အပံ့၊ ပုံမှန်စျေး - $ 397 - 97 $ Save!
အရေးကြီး - သင်သည် News Action Trader EA နှင့် News Feed ဆော့ဝဲလ်ကိုအကောင်းဆုံးချိန်ညှိချက်များနှင့်အတူရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - News Trading အတွက်အမြတ်အစွန်းကျွမ်းကျင်သည့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်မှဖန်တီးပြီးအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သတင်းပေးပို့သည့်စနစ် Mikhail Zaprudin.
Mikhail သည်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး5နီးပါးနှစ်ပေါင်းများစွာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက်အချိန်နှင့်တပြေးညီယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်ရေးစနစ်များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူသည် Metatrader4(MT4) နှင့် Metatrader5(MT5) ပလက်ဖောင်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူ၏အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်ဆန်းသစ်သောစနစ်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း၊ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်သောနည်းပညာနှင့်အံ့သြဖွယ်မြန်နှုန်းတို့ဖြင့် \_ t သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA မင်းသတင်းကိုရောင်းသင့်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲ။ ၎င်းသည်စိတ်ချရသောသတင်းအရင်းအမြစ် (Forex Factory - Forex ပြက္ခဒိန်) မှအချိန်နှင့်တပြေးညီစီးပွါးရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီးအလိုအလျောက်ရှေ့ပြေးအနေဖြင့်သင့်အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စီမံခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA - ဤအပြည့်အဝအလိုအလျောက် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးဇယားများကိုကြည့်ပြီးထိုင်နေတာ၊ hugeရာမလှိုင်းထတာကိုတွေ့တာလား၊ အောက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာလား။
ဤအချက်သည်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသတင်းဖြစ်ရပ်များကိုသင်ရောင်းဝယ်ပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရရှိပါကသင်သည်တစ်တန်လျှင်ငွေရှာနိုင်သည်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှု Trader EA - ရိုးရှင်းသောကုန်သွယ်မှုစနစ်မျှသာမဟုတ်ပါ
သင်သိသည့်အတိုင်းကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိပါကကုန်သွယ်ရေးသတင်းမှပေါ်ပေါက်လာသောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်သည် slippage နှင့် န့် တိုးချဲ့။ ၎င်းသည် ဦး ရေပြားစနစ်များနှင့်သတင်းစနစ်များကိုပျက်ပြားစေသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီ EA မဟုတ်ဘူး။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA ကုန်သွယ်မှုပြန့်ပွားခြင်းနှင့် slippage များအတွက်အကောင့်တစ်ခုအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့မဟာဗျူဟာရှိပြီးကုန်သွယ်ရေးပစ်မှတ်များအရှိန်အဟုန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန် variable ကိုနှစ် ဦး စလုံးအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် အချို့အခြေအနေများတွင်အခြေအနေများလုံးဝမှားယွင်းနေပါကအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
သငျသညျ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ ကျိုင်းတုံ? ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်များအတွက်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Whipsaws များသည်စျေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သောအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပြီးသင်၏ကုန်သွယ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်မှုသည်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့မသွားမီကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကသူတို့အနိမ့်ဆုံးကိုတက်ရွေ့လျားသွားခြင်း (သို့) အပြန်အလှန်အားဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုမှာအနိုင်ရဖို့နီးကပ်နေချိန်မှာကုန်သွယ်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ နှင့်ပင်တပြိုင်နက်မျိုးစုံအရောင်းအထွက်တာ။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA ကာကွယ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိရန်အတွက်တောင်မှတားမြစ်ချက်များရှိသည်။
အရေးအပါဆုံးအသှငျအပွငျမှန်ကန်သောဖြစ်ပါတယ် အချိန်ကိုက်။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်မှုကိုစောလွန်းစွာ setup ပြုလုပ်ပါက၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုကိုလုံးဝကျပန်းအရောင်းအ ၀ ယ်များမဖြစ်စေမီ၎င်းတို့အားအစပျိုးပေးသည်။ နောက်ကျလွန်းလျှင်၊ အကောင့်မှနှောင့်နှေးမှုများနှင့်မမှန်ကန်သည့် entries များထံမှသင်၏အကောင့်ထဲမှအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုမှုတ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA သတင်းများမှ အစပြု၍ ကုန်သွယ်မှုများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသေချာစေရန်နှင့်အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ရန်၊ အဓိကဆုံးရှုံးမှုကိုရှောင်ရန်နှင့်အကောင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်အချက်အလက်များကိုဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုအချိန်ကိုက်ခြင်းတို့သည်အလွန်တိကျသည်။ အားလုံးလျင်မြန်စွာနှင့်စေ့စပ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူအလိုအလျှောက်ပြုလေ၏။
News Action Trader EA - သတင်းရောင်းဝယ်မှုအတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသည့်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
သငျသညျ၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ သတင်းရောင်းဝယ်မှု မတိုင်မှီ? သတင်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ် ငွေကြေးနှင့်အခြားဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများကိုကုန်သွယ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များသည်ဘဏ္releasesာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အရေးပါသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေးသတင်းအစီရင်ခံစာများသည်စျေးကွက်တွင်ကာလတိုလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေလေ့ရှိပြီးကုန်သည်များအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အပြည့်အဝအလိုအလျောက် ပြီးခဲ့သည့်2နှစ်များအတွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးသက်သေပြခဲ့ပြီး Forex trading စနစ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်၍ အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။
ဒါဟာမ မ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဇယားကွက်သို့မဟုတ် martingale နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါဟာမ မ တက်ကြွစွာခေတ်ရေစီးကြောင်းဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်မှု။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA မျိုးစုံငွေကြေးစုံအပေါ်အလုပ်လုပ်တယ် (preferebly AUDJPY, AUDUSD, GBPUSD, NZSDUSD, USDCAD နှင့် XAUUSD) မျိုးစုံစျေးကွက်အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီး။
ဒီမှာသင်သိထားသင့်တဲ့အချက် သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA:
ဒါဟာအပြည့်အဝဖွင့်လှစ်, စီမံခန့်ခွဲခြင်း, ပိတ်ပြီးအရောင်းအထဲကနေအလိုအလျောက် 100% ပါပဲ။
အမြဲတမ်းတသမတ်တည်းကုန်သွယ်မှု၏အစကတည်းက aligned သောစျေးကွက်၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေးစားပါသည်။
နည်းပညာနှင့်အတူသာမန်အတွေ့အကြုံရှိသည်သူကလူများအတွက်ဖော်ရွေနဲ့ setup ရန်လွယ်ကူ Beginner ။
ဤ Forex စက်ရုပ် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အဆိုပါ Brexit ကာလအတွင်းအမှန်တကယ်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်အကောင့်ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အဆိုပါမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ် FIFO ကိုက်ညီ, အဘယ်သူမျှမစောင်ရန်းအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သြဇာအကောင့်နှင့်အတူလိုက်ဖက်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
အသုံးပြုမှု Make သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံကဘာလဲ သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဘောင်, အကြေးခွံနှင့်သင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကန့်သတ်သငျသညျပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် 24 /5အမြတ်အစွန်းလဲလှယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
လူသားမြားသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမတူဘဲ, သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA အချို့သောနာရီများ၌အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်း၊ လာမည့်စုံတွဲနာရီသို့မဟုတ်နေ့ရက်များအတွက်လာမည့်သတင်းဖြစ်ရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့အပြင်ဤကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်သင့်အားသတ်မှတ်ထားသောအန္တရာယ်များနှင့်နှစ်လိုဖွယ်အမြတ်အစွန်းများနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကုန်သွယ်မှုစနစ်သည်အမြတ်များစွာရရှိပြီးနေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဤ FX စက်ရုပ် အားလုံးအားလုံးအပေါ်အရောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေကျနော်တို့ကို အသုံးပြု. အကြံပြု AUDJPY, AUDUSD, GBPUSD, NZSDUSD, USDCAD နှင့် XAUUSD (ရွှေ) သာ။
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းထံမှစစ်မှန်သော ECN အကောင့်အကြံပြု IC စျေးကွက်များ, ThinkForex, သို့မဟုတ် (အမေရိကန်ကုန်သည်များအတွက်) FX ရွေးချယ်မှု $ 200 ၏နိမ့်ဆုံးအကောင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူ။
အသင်း ၀ င်သည့်နေရာများတွင်သင်သည် Activate Now link ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ News Action Trader ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်ရမည်။ ဤသည်ကသင့်အားအကောင့်နံပါတ်ကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်သည်စာမျက်နှာသို့အချိန်မရွေးပြန်လာနိုင်ပြီး၊ အကောင့်ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်သည်ကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
ပုံမှန်စွန့်စားမှုပမာဏကို ၁% သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောတည်ငြိမ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ၂% ထက်ကြီးသောတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA - သင်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်တစ်ခုတည်းသောသတင်းရောင်းဝယ်ရေးကိရိယာ
အတူပျက်ကွက်အလွန်ဖှယျအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA ဒီကုန်သွယ် software ကိုအာမခံမယ့်များ၏ဖန်တီးသူဖြစ်သောကြောင့် 70% အောင်မြင်မှုနှုန်းထက်ကိုပိုပြီး နှင့်လည်းအတည်ပြုထားသောရလာဒ်များပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: ဤ EA သည်သင့်အတွက်သင့်တော်မှုရှိမရှိသင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောင်းချသူအားမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုခြွင်းချက်မရှိရက်ပေါင်း ၃၀ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အာမခံချက်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 347 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
တရားဝင်သတင်းလှုပ်ရှားမှုကုန်သည် EA ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ
NEWS ACTION TRADER EA - အသစ်သောကုန်သွယ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်အသစ်အတွက်အမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး - + 5.3% လစဉ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း (အစစ်အမှန်ငွေရင်းငွေစာရင်း!) ချစ်ခင်ရပါသော Forex ကုန်သည်၊ သတင်းများ! News Action Trader EA သုံးသပ်ချက် - သတင်းအရောင်းအဝယ်အတွက်အမြတ်အစွန်းကျွမ်းကျင်သည့်အကြံပေးအသစ်ဤအချက်အလက်များနှင့်အပိုဆုများကိုရယူပါ။ https://www.bestforexeas.com/news-action-trader-ea-review/ News Action Trader EA သည်အလွန်အစွမ်းထက်။ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည် Mikhail Zaprudin ဖန်တီးထားသောအပြည့်အဝအလိုအလျောက်သတင်းပေးပို့စနစ်။ Mikhail သည်5နီးပါးနှစ်အတန်ကြာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက်စိတ်ချရသောအချိန်နှင့်တပြေးညီကုန်သွယ်ရေးစနစ်များကိုတီထွင်ခဲ့သောအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် Metatrader4(MT4) အတွက်အကြံပေးများစွာကိုတီထွင်ခဲ့သည်။... ဆက္ဖတ္ရန္
NEW ACTION TRADER EA - သင် Excel ကိုကူညီရန်အကြံပြုချက်များချစ်ခင်ရပါသော Forex ကုန်သည်! အောက်ပါအကြံပြုချက်များသည်ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် Forex အရောင်းအ ၀ ယ်မှအကောင်းဆုံးနှင့်အမြတ်ဆုံးသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ News Action Trader EA အကြောင်းပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။ https://www.bestforexeas.com/news-action-trader-ea-review/ ကျေးဇူးပြု၍ ဤအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအခြားရာပေါင်းများစွာအပါအဝင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်အခြားကုန်သည်များ။ 1) မည်သည့် Forex ပွဲစားကိုသင်သုံးသင့်သနည်း။ ကော်မရှင်များ၏အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ ECN / NDD အကောင့်ဥပမာ IC Markets သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူပါ။ https://www.bestforexeas.com/ic-markets-review/... ဆက္ဖတ္ရန္